Caalamka oo Soojeediyey Soomaaliya In Cuna Qabataynta Laga Qaado | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Caalamka oo Soojeediyey Soomaaliya In Cuna Qabataynta Laga Qaado
Magaalada Qaahira ee Xarunta dalka Masar ayaa waxaa ka furmay shirka Baarlamaanada Carabta,kaas oo looga hadlay Arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladaha dalalka Suuriya, Ciraaq iyo Soomaaliya iyo wadamada Carbeed qaarkood.
Shirka Baarlamaanka oo ay ku mideysan yihiin 22-ka dowladood ee Carabta ah ayaa waxaa ka qeyb-galaya Xubno ka socda baarlamaanka Soomaaliya,kuwaas oo Baarlamaanka Carbeed hor-dhigay xaaladaha ka aloosan dalka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaannada Golaha Shacabka oo shirkaasi ka qeyb-galaya ayaa sheegay in Xubnaha Baarlamaanka Carbeed ay amaaneyn dadaalka ay dowladda ugu jirto la-dagaalanka Al-Shabaab,guulaha ay kasoo hoysay arrimaha dhaqaalaha,la-dagaalanka musuq maasuqa iyo sare u qaaadida mashaariicda lagu hormarinayo Caafimaadka iyo Waxbarashada.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in siweyn looga hadlay faragelinta dowladaha Shisheeye ay Soomaaliya kala kulmeyso,sidoo kalena Baarlamaanka Carbeed ay QM ka codsadeen in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ah ee saaran si ay tayeynta Ciidamadeeda kor ugu qaado si ay u hesho ciidan ku filan ilaalinta Badeeda, Barigeeda iyo hawadeeda.
Ugu dambeyn Kulanka ay yeesheen Baarlamaanka Carabta ayaa waxa ay uga hadleen xiisada ka dhex-aloosan qaar kamid ah dalalka Carbeed,sida Suuriya iyo Ciraaq taas oo siweyn ay ugu kala qeyb-sameen Baarlamaanka Carbeed.
Previous articleDEG DEG:Madaxweynaha Deni oo Gaadhey Gobolka Sanaag .
Next articleAKHRISO:- Khilaafka Galmudug oo Weji kale Yeeshay + Odayaasha dhaqanka oo cabsi kale bilaabay.